1aviagem.com - Talooyin, waraysiyo, sheekooyin ay ku sheegeen markii ugu horreysay ee hiwaayadda
Costa Rica Wadanka sameeyay doorashada saxda ah!
Costa Rica, oo ah waddanka sameeyay doorashada saxda ah! Ah! Costa Rica, dalkan oo safarkiisii ​​ugu horreeyay halkaas igala yaabay intii la filayay! Iyo ikhtiyaar sax ah bay sameeyeen? Hadda waan kuu sheegayaa. Ka warran safarka inta lagu jiro Faafida? Kahor intaanan ka hadlin Costa Rica…
Leia mais Costa Rica Wadanka sameeyay doorashada saxda ah!
Boqortooyada Ingiriiska, Dhul 5 subaxnimo shaah ah iyo meel aan laga daahi karin!
Maanta waxaan ka hadlaynaa Ingiriiska, waddanka lagu yaqaan shaaha 5:00 galabnimo, hana daahin! Markaan ka imaado London kana dhoofay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Heathrow safarkaygii ugu horreeyay ee aan ku imid Boqortooyada Midowday, waxaa mar horeba suurtagal noqotay in la arko wax aad ugu wanaagsan dalxiiska. Gegada diyaaradaha waxay kuxirantahay tareenka dhulka hoostiisa mara. Iyo halkee…
Leia mais Boqortooyada Ingiriiska, Dhul 5 subaxnimo shaah ah iyo meel aan laga daahi karin!
Beljum - waa waddanka ugu fiican ee lagu akhriyo majaajillada, iyadoo la cabayo biir iyo cunista shukulaatada
Maanta waxaan ka hadli doonnaa Biljamka, oo ah waddan dhan oo ku saabsan majaajillada, biirka iyo shukulaatada. Waxaan rajeynayaa in aqrintu tahay wax lagu farxo! Ugu dambeyntiina waxaan la kulmi doonnaa wax lala yaabo (kaliya reer Brazil, hadda). Antwerp - caasimada dheeman Meel aad u fiican oo aad ku tagto Belgium. Haddii ay suurtagal tahay, waxaan kugula talinayaa tareenka, sababtoo ah horeyba in
Leia mais Beljum - waa waddanka ugu fiican ee lagu akhriyo majaajillada, iyadoo la cabayo biir iyo cunista shukulaatada
Immisa abaalmarinood oo ay bixiso hooyadaa ayaa mudan? - Qoyska Curie wuxuu aasaasay ugu yaraan 2 - Poland iyo France
Maalinta Hooyada waxaan jeclaan lahaa inaan sare u qaado su'aasha soo socota: Immisa Abaal Marinta Nobel ayey hooyadaa u qalantaa? Waxaan u maleynayaa in kaliya iyada oo na siisay hadiyadda nolosha, iyadu mar hore ayey u qalantay mid, tan kale waxay u timid inay na taageerto illaa aan ka dhiirrano oo lugahayaga ku soconno. Hagaag, qoyska Curie waxay aasaaseen ugu yaraan 2…
Leia mais Immisa abaalmarinood oo ay bixiso hooyadaa ayaa mudan? - Qoyska Curie wuxuu aasaasay ugu yaraan 2 - Poland iyo France
Maxay tahay sababta shirkadaha reer Brazil ay ugu hoggaansamayaan fikradda ESG - Maamulka Bulshada ee Deegaanka, iyo sida ay uga faa'iideysan karto qof walba.
Waa maxay ESG? Fikradda ESG waa dheelitir u dhexeeya safarka: Deegaanka, Bulshada iyo Maamulka ganacsiga. Su'aalahan waxaan tusaale ugu soo qaadan karnaa sida: Deegaanka: Su'aasha deegaanka waxaa ka mid ah: isbeddelka cimilada, kheyraadka dabiiciga ah, wasakheynta, qashinka iyo noolaha kaladuwan. Bulsho: Qiyaasta bulshada waxaan ku muujin karnaa: raasumaalka aadanaha, fursadaha bulshada,,
Leia mais Maxay tahay sababta shirkadaha reer Brazil ay ugu hoggaansamayaan fikradda ESG - Maamulka Bulshada ee Deegaanka, iyo sida ay uga faa'iideysan karto qof walba.
Safarkii ugu horreeyay ee aan ku aado Austria - Waddankii adduunka isbedel ku sameeyay - Vienna
Ka faa'iideysiga karantiilka (sababtoo ah COVID-19) si loo cusbooneysiiyo baloogga. Xusuusnow, haddii aad bixi doontid, xiro maaskaro, haddii aad is tallaali karto oo aad adeeci karto xeerarka caafimaadka. Markii aan intaas iri, ma booqan doonnaa Austria? Xiisaha xiisaha Waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo waa in Awstaria luqadda ugu weyni tahay Jarmal. Laakiin jooji…
Leia mais Safarkii ugu horreeyay ee aan ku aado Austria - Waddankii adduunka isbedel ku sameeyay - Vienna
Nederland? Heerka sare ee Holland iyo kala duwanaanta
Adoo ka faa'iideysanaya karantiillada, aan cusbooneysiinno balooggan wax yar. Fikrad weyn ayaa ah in dib loo eego albumka sawirka. Oo dib u eegis ku sameeya, oo malaha ahayd "safar mustaqbal", iyo adduun dhaqameed! Haa, maanta waxaan ka hadli doonnaa Holland, oo ah waddanka wax badan ka bara maadooyinka oo dhan. Holland waa…
Leia mais Nederland? Heerka sare ee Holland iyo kala duwanaanta
Safarkii ugu horeeyey ee Lithuania - Vilnius - Isagoo arkay saaxiibo wanaagsan
Maxaa aniga aad ii soo jiitay? Si aan ula kulmo saaxiibkay oo ka yimid Belarus, oo xitaa uur leh, ka soo tallaabay xadka si ay mar labaad u aragto saaxiibkeedii hore ee reer Brazil, tani waxay ahayd khibrad gaar ah. Haddana hadiyado badan bay keensatay! Biin iyo kaarka boostada ee Minsk, iyo qaar ka mid ah caruusadaha ka yimaada Belarus nasiib. (Oh iyo waliba cookies)
Leia mais Safarkii ugu horeeyey ee Lithuania - Vilnius - Isagoo arkay saaxiibo wanaagsan
Maxay Prague u tahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu qaato Halloween? - Jamhuuriyadda Czech
Waxaan ognahay in Oktoobar 31-keeda loo tixgeliyo Hallowen, ama Halloween, oo ah maalin fasax ah oo aan weli si rasmi ah uga mid ahayn kalandarka Brazil, laakiin looga xuso meelo kala duwan oo adduunka ah. Halkan Brazil waxaan ku leenahay 02-da Nofeembar, maalin fasax ah iyo maalinta dhimashada. Laakiin waa maxay sababta Czech Republic…
Leia mais Maxay Prague u tahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu qaato Halloween? - Jamhuuriyadda Czech
Maxay Mayans iyo Aztecs na barayaan aafada? - Mexico
Mayans iyo Aztec, xitaa qarniyo ka dib, weli wax badan bay ina barayaan! Haddii aan fiirino wax yar oo taariikhi ah waan baran karnaa oo khaladaadka qaar kuma celin karno. Weligaa ma isweydiisay sababta ay reer yurub u xukumaan Ameerika oo aysan u ahayn kan kale Hagaag, hadaad ka jawaabto su'aashan adoo dhahaya taasi waa sababta…
Leia mais Maxay Mayans iyo Aztecs na barayaan aafada? - Mexico
Muxuu dhulka Santa u yahay mid aad u qabow? - Finland - Helsinki
Waan ogahay inay weli wax yar jiraan kahor Kirismaska, laakiin waxaan rabay inaan wax ka qoro dhulka Santa Claus ee maxaan uga hadlin safarkayga ugu horeeya halkaas? Marka bal aan wax yar ka hadalno dadka Finnishka ah, dadkan wax ku oolka ah ee taageerada leh. Sideen ku imid Finland? My ugu horeysay…
Leia mais Muxuu dhulka Santa u yahay mid aad u qabow? - Finland - Helsinki
Sida ay u duulayso Diyaaradda Qatar Airways, iyo garoonka diyaaradaha Dooxa.
Sidee u tahay duulimaad ay la socoto Qatar Airways? Ma ogtahay fursaddaas ka muuqata noloshaada oo ay adag tahay in lagu celiyo? Taasi waa sax, kani wuxuu ahaa safarkaygii ugu horeeyay ee aan ku tago Qatar Airways. Qoraalku wuxuu horeyba diyaar ugu ahaa Aasiya, laakiin xoog kufsi dartiis suuragal ma ahayn in la dhammaystiro anteenada, taasoo…
Leia mais Sida ay u duulayso Diyaaradda Qatar Airways, iyo garoonka diyaaradaha Dooxa.
Uruguay waa wadan aan aheyn Koonfurta Ameerika - Montevideo
Aniga oo ka faa'iideysanaya waqtiga firaaqada ah karantiilkan, waxaan go aansaday in aan sawirro ka arko safaradii hore… Waxaan ogaaday in aan haysto waxyaabo badan oo aan ku cusboonaysiin karo baloogga sidii aan u malaynayay. Marka maanta waxaan ka hadlayaa xoogaa yar oo ku saabsan Uruguay. Waddan aad uga duwan Koonfurta Ameerika, iyo sababtee? Sababtoo ah siyaasadooda guud. Gudaha…
Leia mais Uruguay waa wadan aan aheyn Koonfurta Ameerika - Montevideo
Wareysiga lala yeeshay reer Brazil, sidee waaya aragnimada isweydaarsiga? - Dab - Talyaaniga
Waa sidee khibradda isweydaarsigu? Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa wax yar oo ka mid ah khibrada waxbarasho ee dibada. Si tan loo sameeyo waxaan isku hallayn doonaa caawimaadda Thereza. Hagaag, waxaan la kulanay markay u timid Brasilia inay u dabaaldegto dhalashada walaasheed. Waxay kaqeyb qaadatay barnaamijka "Saynis la'aanta Xudduudda" waxayna lahayd great
Leia mais Wareysiga lala yeeshay reer Brazil, sidee waaya aragnimada isweydaarsiga? - Dab - Talyaaniga
Bidixda vs. fikirka saxda ah, maxay ugu dhowdahay in aan macquul aheyn in la qeexo dhinaca aad ku jirto?
Beryahan dambe Baraasiil waxaa jiray hadal hayn badan oo ku saabsan dagaal feker ahaan loo malaynayo, oo u dhexeeya dadka u maleeya qaab "ka sii saxan" oo ka dhan ah dadka u malaynaya "bidix badan". Laakiin miyaad ogtahay macnaha ereyadan? Kahor intaanan bilaabin, aan aragno halka ay ka yimaadeen ereyadan. Asalka bidix iyo midig.
Leia mais Bidixda vs. fikirka saxda ah, maxay ugu dhowdahay in aan macquul aheyn in la qeexo dhinaca aad ku jirto?
Wax ka iibsiga Ciudad Del Este miyay u qalantaa? - Paraguay
Waa hagaag, ragga, maadaama aan ku jirno karantiil, waxaan go'aansaday inaan dib u eego qaar ka mid ah sawirradii hore dhexdoodana waxaan ka helay safarkaygii ugu horreeyay ee Paraguay. Oo waxaan u maleeyay: Wow, wax yar ayey ka hadlaan Paraguay, maxaan uga yara hadli lahaa? Waana tan natiijada. Waa Xagee? Paraguay waxay ku taal Koonfurta Ameerika ...
Leia mais Wax ka iibsiga Ciudad Del Este miyay u qalantaa? - Paraguay
Dibadbax - Brasilia - Brazil
Waxaa jira 10.114 dhintay 09/05/2020 (iyo kacitaan), kuwan kaliya waxaa sabab u ah COVID-19. Qalooca dhibbanaha miyaa kor u kacay ku filan kuwa doonaya inay arkaan meesha ugu sarreysa ee qallooca? Sideed dhaqaalaha ugu badbaadinaysaa shaqaale dhintay? Sideed u soo jiidan kartaa maalgashadayaasha shisheeye haddii aad rabto inaad sawirradooda la wadaagto geeri? Waxay…
Leia mais Dibadbax - Brasilia - Brazil
Safar 3 maalmood ah oo loo maro Bariloche - Argentina
Safar 3 maalmood ah oo loogu talagalay Bariloche - Argentina Iyo waqtigan karantiilnimada wax ka fiican ma jiraan qaadashada album hore iyo fiirinta sawirrada. Taas oo igu celisay safarkaygii ugu horreeyay ee Bariloche, kaas oo ku yaal Argentina. Waxaan joogay 3 maalmood oo keliya magaalada, waxaanan ku guulaystay inaan qabto laba saldhig. Qorraxda iyo barafka. IYO…
Leia mais Safar 3 maalmood ah oo loo maro Bariloche - Argentina
Mayaankii iyo saadaashii dhamaadka adduunka - Mexico
Maxay Maya na bari karaan dhamaadka aduunka? Waqti ka hor, 2012, dad badan ayaa maqlay dhamaadka adduunka. Iyo suufiyado badan ayaa lagu soo qaaday xadaarada Mayan. Si kastaba ha noqotee, warar xan ah ayaa sheegay in marka la eego jadwalka taariikhda Maya, adduunku ku dhammaan doono…
Leia mais Mayaankii iyo saadaashii dhamaadka adduunka - Mexico
Pilanesberg Park - safari sawir ah iyo casharo xayawaan ah - Koonfur Afrika
Walaalayaal waad salaaman tihiin, qoraalkani wuxuu noqon doonaa isku dhaf tilmaamo iyo dabeecad xayawaan ah oo la bartay safarkaygii ugu horeeyey ee Koonfur Afrika.Talooyin ku saabsan Kruger Park Inta badan dadka ka fekeraya tagitaanka Koonfur Afrika, ama kuwa halkaas joogay waxay ku fikiraan in la sameeyo safari sawir wadista safari ah. …
Leia mais Pilanesberg Park - safari sawir ah iyo casharo xayawaan ah - Koonfur Afrika
Wareysi ayaan la yeelanay haweeney reer Meksiko ah waxaanan u soo qaadanay talooyinka iyo tabaha Coronavirus ee Mexico
Waxaan ka wareysanay haweeney reer Mexico ah oo aan keenay talooyin ku saabsan Virus-ka Corona iyo Talooyin ku saabsan Mexico! Waxaan la kulmay Érika intii lagu jiray casho magaalada Rio de Janeiro. Waxayna ku soo biirtay kooxdayada dalxiiska waxaanan isla wadaagnay miis isku mid ah. Érika waxyar ayuu xiiseynayay sida miiska caalamiga uu u ahaa. Waxaan haysanay dad ...
Leia mais Wareysi ayaan la yeelanay haweeney reer Meksiko ah waxaanan u soo qaadanay talooyinka iyo tabaha Coronavirus ee Mexico
Sidee ayey suurtagal u tahay in la helo gaadiid dadweyne oo lacag la’aan ah? - Estonia - Tallinn
Safarkii ugu horeeyey ee aan ku tagno Tallinn, caasimada Estonia, markii aan soo gaarnay garoonka diyaaradaha caalamiga waxaan la yaabnay garoon aan caadi aheyn. Xaqiiqdii sida ay umuuqatay waxay ahayd in loogu talagalay inay noqoto mid kamid ah garoomada diyaaradeed ee ugu quruxda badan uguna raaxada badan. Waxaan qirayaa in inta lagu guda jiro safarkayga ay madaarro yar u muuqdaan inay be
Leia mais Sidee ayey suurtagal u tahay in la helo gaadiid dadweyne oo lacag la’aan ah? - Estonia - Tallinn
Soojiidashada Gaborone - Botswana
Waxa laga yeelayo Gaborone - Botswana Safarkaygii ugu horreeyay ee Afrika waxaan go’aansaday inaan ka gudbo xadka u dhexeeya Koonfur Afrika iyo Botswana. Si kastaba ha noqotee, Brazil wax yar ayey ka fog tahay qaaradda Afrika. Marka waxay ila noqotay fikrad wanaagsan in laga gudbo xadka oo la arko haddii Botswana u egtahay…
Leia mais Soojiidashada Gaborone - Botswana
South Africa Wareysi lala yeeshay South Afrika. Waxaana dhacay is badal lama filaan ah bartamaha wareysiga.
Kahor intaanan bilaabin waxaan ubaahanahay inaan idhaahdo wareysigani gebi ahaanba waa la qabtay. Ma aanan helin waqti aan uga fikirno qoraal waxaana lagu sameeyay oo keliya xoog. At Lexiegh soo jeedintiisa. Waxay rabtay wax dhab ah! Sida ugu wanaagsan ee tan lagu gaari karo waxay noqon kartaa in sidan loo sameeyo, iyadoo la adeegsanayo taleefanka gacanta si loo duubo iyo…
Leia mais South Africa Wareysi lala yeeshay South Afrika. Waxaana dhacay is badal lama filaan ah bartamaha wareysiga.
Miyaad Jireen Qalabka Tooska ah ee Knights?
Sheeko weyn oo ka socota qaaradda hore.
Leia mais Miyaad Jireen Qalabka Tooska ah ee Knights?
Maxaa lagu booqanayaa Riga? Magaalada midaynaysa qaab dhismeedka cusub iyo tii hore - Latvia
Hagaag, intaanan Riga lafteeda ka hadlin, maxaan halkaas ugu dambeeyay? Rabitaanka ah in aan booqdo dhammaan waddamada adduunka, ama ugu yaraan badankood, Latvia waxay ku jirtay bartamaha wadada, wadada badhkeedna waxay ahayd Latvia. Inta udhaxeysa Estonia iyo Lithuania.😎 Waxaan layaabay marinka…
Leia mais Maxaa lagu booqanayaa Riga? Magaalada midaynaysa qaab dhismeedka cusub iyo tii hore - Latvia
1- Maxaan ugula talinayaa Banco Inter? Haddii aad u baahato koontada hubinta ee reer Brazil sabab kasta ha noqotee, hadey tahay inaad ku nooshahay halkan Brazil, ama shaqo darteed, ama inaad u timid inaad waxbarto, dalxiis dartiis awgood, ama inaad dirto ama hesho xawaaladaha dibadda soo jeedintu waa in…
Leia mais Bangiga Inter
Luxembourg - Duck ugu dambeeyay ee Dunida
Luxembourg waa wadan yar oo kuyaala qaarada Yurub, deriska la ah France, Belgium iyo Germany. Maxaase mudan in la booqdo? Sababtoo ah isagu waa Duck ugu dambeeya adduunka. Waxaanaad isweydiin kartaa naftaada: waa maxay Grand Duchy? Jawaab fudud: waa waddan, halkii laga dooran lahaa madaxweyne la doorto, leh duke weyn oo…
Leia mais Luxembourg - Duck ugu dambeeyay ee Dunida
Sidii lagu balamay qoraalkii ugu dambeeyay, waxaan ka hadli doonaa qaaradda sideedaad. Iyo Aaway Qaaraddii Sideedaad? Waxay ku sii nagaaneysaa madaxeena. Meel bannaan, oo ku wareegsan Dunida! Raadinta sawirada dayax gacmeedka si loo ogaado baaxadda dabka Brazil guud ahaan. Taasi waa, oo ay ku jiraan 6-da waaweyn ee reer Brazil ...
Leia mais Sideedda Sideedaad
Kawaran haddii aan kuu sheego in annaga (aadanaha) Dhulku ka helay qaarad toddobaad? Haa, warku wuxuu umuuqdaa mid wanaagsan, laakiin nasiib daro sidaas maahan. Qashinka ku urursan badweynta dhexdeeda dartiis waxaa qaada mawjadaha badda oo aakhirkood ku uruursada barta Badweynta Baasifigga ee u dhexeysa California iyo Hawaii ...
Leia mais Afarta toddobaad
Barcelona waxay ku fiican tahay kuwa jecel naqshadaha aan caadiga ahayn. Fagaaraha iyo gudaha goobaha dalxiiska ee hoos ku taxan runti waxay u keenayaan soo-booqde kasta khibrad u gaar ah oo ka baxsan qibradeeda. Haddii kani yahay safarkii kuugu horreeyay ee aad ku timaado Barcelona, ​​raac talooyinkan: 1- Luqadda: Waxa ugu horreeya ee aad ogaan doonto ...
Leia mais Talooyin ku saabsan waxa laga sameeyo Barcelona
Cadaadis maaha Notre-Dame
Ma aqaano sida loo bilaabo qoraalkan, markaa waxaan kuu sheegayaa waxa ay fikradiisu tahay. Waxay ku ammaaneysaa Cathedral Notre-Dame, oo dab la qabadsiiyay Abriil 15, 04. Waa wax dad badan dhaqaajiyey, marka lagu daro buuq iyo murugo ay xaqiiqdu keento. Aniga oo safar ugu maqnaa France asxaabteyda iyo…
Leia mais Cadaadis maaha Notre-Dame
Sidee loo heli karaa hareeraha Paris?
Sidii lagu balamay qoraal hore, waqtiga xiga ee aan aadayo ka hadalka Paris waxaan halkaan kuugu soo qaadan doonaa xoogaa talooyin ah. (Boostada aan ku ballanqaaday waa kan) Kan waa hagaag markaa waa waqtigii aan ilaalin lahaa ballanta. Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad qeexdo halka aad ka bilaabaneyso ...
Leia mais Sidee loo heli karaa hareeraha Paris?
Ma la mamnuucay daawooyinka kafateeriga iyo daroogada?
Qoraal hore waxaan ku wareysanay haweeney reer Peru iyo dalxiis reer Brazil ah oo ku saabsan Peru. (Waad heli kartaa wareysigan weyn adigoo gujinaya halkan). Isaga dartiis waxaan go’aansaday inaan keeno xiisaha ku saabsan shaaha kookaha Peruvian-ka. Shaaha Coca Xiisaha ugu horeeya ayaa ah in shaaha kookaha halkaa la geeyo ...
Leia mais Ma la mamnuucay daawooyinka kafateeriga iyo daroogada?
Maxay Faransiisku ku dhejiyaan nuucooda markaad ku hadashid Ingiriisi iyo maxay tani u leedahay in ay la sameeyaan Brazil?
Maanta waxaan ka hadli doonnaa luqadaha iyo sababta Faransiisku u duuduubay sankooda markaan kula hadlayno Ingiriisiga. Hagaag, ku dhowaad dhammaan dadkii aan kala hadlay Faransiiska, oo halkaas joogay, waxay had iyo jeer yiraahdeen laba waxyaalood: In ay jirto meel qurux badan oo qurux badan. Iyo in Faransiisku sanka ka duuduuban haddii aad ...
Leia mais Maxay Faransiisku ku dhejiyaan nuucooda markaad ku hadashid Ingiriisi iyo maxay tani u leedahay in ay la sameeyaan Brazil?
Gali emailkaaga si aad ugu biirto boggan oo aad u hesho daabacado cusub.
by Naqshad Sameynta Pro
Ipes cad 07 -dii Sebtembar ... Waad ku mahadsan tahay inaad na siisay farriintan muhiimka ah ee nabadda.
Waqtiyada adag waxaad la mid noqotaa # ipê oo xitaa # ubaxa # ubax oo biyo ka soo dhaamiya ceelka guntooda # xididdada adag si ay isu toosiso. Xitaa waxay ka dhigeysaa # hooskii kuwa aan xitaa xusuusneyn markay ubax yihiin. Waad ku mahadsantahay ipes. # ka fikir
Bal u fiirso #labkeena # shimbiraha oo sameynaya # guul
Ku biir 240 macaamiishu kale
Raadinta faallooyinka ...